သင်္ဘောသား သတို့သမီး ရွေး ခြယ်နည်း ~ MSU Portal
4/07/2013 01:01:00 AM Navi Kyaw No comments
တစ် ခါတုန်း က ကိုလူပျို ဆိုတဲ့ သင်္ဘောသား တစ်ယောက် ရှိတယ်။ တစ်နေ့ မှာ သင်္ဘော သားလူပျို ကြီး သည် မိတ်ဆွေ အပေါင်း အသင်း များ ရဲ့ သာယာ သော မိသား စု ဘဝ လေးကို အား ကျ မိသောအခါ မိန်း မ ယူ ရန် ဆုံး ဖြတ်ချက် ချ လေ သည်။
သင်္ဘောသား လူပျို ကြီး သည် သူ ၏ အလုပ် အကိုင် (သင်္ဘောပေါ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း) အားသူ လက်ထပ် မည့် အမျိုး သမီးအား ကြို တင် အသိပေးခြင်း မရှိ ပဲ လူပျိုကြီး တို့ ထုံး စံ အတိုင်း စည်း ကမ်းချက်တွေ။ သတ်မှတ်ချက်တွေ နဲ့ သူ ယူမည့် အမျိုး သမီး အား သူ၏ ကိုယ်ပိုင် စံ နှုန်း ဖြင့် ရွေး ခြယ်မည် ဟု ဆို ကာ အောက်ဖော် ပြပါ အတိုင်း သတင်း စာတွင် ထည့် လေသည်။
ကျွန်တော် ကိုလူပျို သည် ၏ အချက် အလက် ဖြင့် ပြည့်စုံ သော အမျိုး သမီး တစ် ဦး အား သတိုး သမီး အဖြစ် ရွေးခြယ် ပြီး လက်ထပ်ထိမ်း မြား မည် ဖြစ်ပါသော ကြောင့် အချက် အလက် နှင့် ပြည့်စုံ ပြီး ဝင်ရောက်လျှောက်ထား မည့် အမျိုး သမီး သည် တစ်ပတ်အတွင်း ကိုယ်ရေး ရာ ဇဝင် အချက်အလက် အပြည့်စုံ။ ဓာတ်ပုံ၃ပုံ (...တွင် ရိုက်ထား သောပုံ+ ဓာတ်ပုံ ချလံ) ဖြင့် လူကိုယ်တိုင် လာလျှောက်ထား နိုင် သည်။
(၁)အသက် ၂၀ မှ ၃၅ နှစ် အတွင်းဖြစ်ရမည်။(အသက် ငယ်သူ ဦးစားပေးမည်)
(၂)တက္ကသိုလ် တစ်ခုခု မှ ဘွဲ့ ရရှိသူ ဖြစ်ရမည်။ (နိုင်ငံခြား ဘွဲ့ ရ ဦးစား ပေး မည်)
(၃)ရုပ်ရည် ပင်ထိုင်မင်းသမီး လုပ်နိုင်သည့် ရုပ်ရည်မျိုး ရှိရမည်။(ကို ရီးယား မင်းသမီး ရုပ်ရည် မျိုး ။လှယဉ် ကျေး မယ် ကိုယ်ဟန် အနေထား ရှိသူ မျိုး ။လေယဉ် မယ်များ ဦးစား ပေးမည်)
(၄)အချက်အပြုတ် ကျွမ်း ကျင် ရမည်( မြန်မာ ထမင်းဟင်း ကို အောင်သိဒ္ဓိ။ ခိုင်ခိုင်ကျော် ဆိုင်များ ကဲ့ သို့ ချက်နိုင်သူ ဦးစား ပေးမည်)
(၅)ဘာသာစကား နှစ်မျိုး (အနည်း ဆုံး) ပြောနိုင်ရမည်။
ရှေ့ နေကြီး ဘစီ(.Ilb,BSC.USA)
ကျွနုပ် ၏ အမှုသည် ကိုလူပျို (၁၂/မမမ၀၀၀၀၀၀၇) ၏ စေခိုင်းမှု ဖြင့်။
ထို ကဲ့ သို့ သတင်းစာ တွင် ကြော်ငြာ ပြီး နောက်တစ်နေ့ တွင် လျှောက်ထား မည့် အမျိုးသမီး ၃၀ဦး အနက် ပထမ ၅ ဦးအား အင်တာ ဗျူး ဖြစ်သည်။
အမှတ်စဉ် ၁။ မ ဖွေးဖွေး(ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင်) အင်တာဗျူး ဖို့ ကိုလူပျို စောင့်နေပါတယ်။ အခန်းထဲကို ကြွပါရှင်။ (ကိုလူပျို ၏ကိုယ်ရေးစာရေးမ လေး အသံ)
ဖွေးဖွေး။ ။ မင်္ဂလာပါ ကိုလူပျို
(ခန့် ချော ကြီးပဲ။ ငါတို့ ဆီ ကမင်းသား တွေနဲ့ ကွာပါ့။ သူက နိုင်ငံခြား မင်း သား ပုံစံ ဒါကြောင့် အပြင် မှာ တန်းစီ နေတဲ့ ဟိုမိန်း မ သက်မွန်မြင့် နဲ့ မိုး ယုစံ တို့ သဲသဲလှုပ် ဖြစ် ပြီး ငါနဲ့ ရန်ဖြစ်ရတာ ကို)့
ကိုလူပျို။ ။မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် ကို လူပျို ပါ။ ဒီ ကိုယ်ရေးရာ ဇဝင် ထဲကအချက်တွေ နဲ့ ဆို ရင် စံ ချိန်မှီပါ တယ်။ ဒါဆို အင်တာ ဗျူး လေးစလိုက်ရ အောင် ဗျာ။
ကိုလူပျို။ ။ မဖွေးဖွေး ကို ကိုလူပျို တစ် ခုတော့ ကြို ပြော ထား မယ်နော် အင်တာ ဗျူးပြီးသွား ရင် အခြား တစ်ပေါက် ကထွက်ပေးပါ။ ပြီးရင် အပြင်မှာ အင်တာ ဗျူး ဖို့စောင့် နေတဲ့ အခြား အမျိုးသမီး တွေ နဲ့ စကား မပြော ပဲ ပြန် ပေးပါ။ အင်တာ မဗျူး ခင် မဖွေး ဖွေး ကို ကျွန်တော် အကြောင်း လေးနဲနဲ ပြောထား မယ။်
ကို လူပျို က သင်္ဘောသား(အလုပ်သင် မှ စပြီး အရာရှိ/အရာရှိကြီးအဆင့် ထိ အားလုံး ကို သင်္ဘောသား ဟု ကိုလူပျို ခေါင်းစဉ်တပ်ပါသည်။) လူပျို တစ်ယောက် ဆိုပါတော့ ဗျာ။
မဖွေးဖွေး ကိုလူပျို ရဲ့ သတင်းစာ ကြော်ငြာ ထဲ က အချက်တွေ ပြည့် စုံ ပါတယ်နော်။
မဖွေးဖွေး။ ။ဟုတ်ကဲ့ ပါရှင်။ပြည့်စုံပါတယ်။
(သင်္ဘောသား လို့ စိတ်ထဲ မှာ ထင်ထား တာ မှန် တာ ပဲ။ တော်သေးတာ ပေါ့ ရုပ်ရှင်လာ မရိုက်လို့ ရုပ်ရှင် လာရိုက်ရင် ငါတို့ မင်းသား တွေ ထမင်း ငတ်မှာ)
ကိုလူပျို။ ။ကောင်းပါပြီ မဖွေးဖွေး။ကိုလူ ပျို ရဲ့ မေးခွန်း လေး တွေဖြေပေး ပါ။
အစား အစာ ထဲမှာ ဘာ အစား အစာ ကြိုက်လဲ။
မဖွေးဖွေး။ ။မြန်မာ့ အစား အစာ တွေ ကြိုက်ပါတယ် ကိုလူပျို။
မြန်မာ့ မုန့် ထဲမှာ မုန့်စိမ်းပေါင်း ဆို ဖွေး ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးပါ။ ရွှပ်...(ဖွေး ဖွေးနှပ်ချည်း ပြန်ရှုံသံ)
ကိုလူပျို။ ။အသီး အနှံထဲမှာ ရောဗျာ( အွန့် နှုပ်ချည်း တွဲလောင်း မုန့် စိမ်းပေါင်း တဲ့ အဲ့ဒါ မို့ မုန့်စိမ်း ပေါင်း ကြိုက်တာ နေမှာ)
ဖွေးဖွေး။ ။ ဖွေး ကတော့ မော်လမြိုင် ဒူရင်းသီး နဲ့ကျွဲ ကောသီး ကြိုက်တယ် ။
..ဘူ..(ဖွေးဖွေး လေခိုး ပြီးလည်သည့် အသံ တိုးသော်လည်း အခန်း တိတ်နေသည်ဖြစ် သောကြောင့် ကြားရသည်)
ကိုလူပျို။ ။ ကောင်းပါပြီ မဖွေးဖွေး။( လူရိုင်း တွေသူငယ်ချင်း နှစ်ဦး ကို မိပြီး ကြိုက်တဲ့ တောထဲ က မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ အသီး ရွေးပြီး မြို ခိုင်း အသက်ချမ်းသာခွင့် ပေးတဲ့ ပုံ ပြင် တောင် သတိရ သေး။ ပြောနေရင်း အဲဟုတ်တယ် အဲ့ဒီ အနံ။သင်္ဘော မိန်လာစနစ် (ပျက်တုန်း ကရတဲ့ အနံ) ထွီ ရွံထှာ။ ဖွေးဖွေး ရယ်လုပ်ရက်ပါပေ့။)
ခဏခွင့်ပြု ပါအုန်း နော် မဖွေးဖွေး။
၅ မိနစ်ခန့် ကြာပြီးနောက်။
ကိုလူပျို။ ။ဆော်ရီး ဗျာ။ လူကြီးတစ်ယောက်ရဲ့သမီး အင်တာ ဗျူး ရက်က မနက်ဖြန် ဖြစ်နေ လို့ ခုဝင် ပြီး အင်တာဗျူးချင်လို့တဲ့ ။ တောင်းပန်ပါတယ် ကိုလူပျို တို့သင်္ဘောသား လောက မှာ VIPဆိုတာ မရှိ လို့ လူကြီးသမီးလည်း တန်းစီ ပေးပါ။ မယုံ ရင် မေးကြည့် သင်္ဘောလိုက်ချင်ရင် ဆိုက်ကားသမား သား ရော သူဌေးသား ရော တန်းစီ ပေးရပါတယ်။ တန်းစီး တာ တစ်ခါ တစ်လေ ကျရင် လှည်းတန်း မီးပိုင့် မိတာ ထက် ကြာတယ်။ အဲ့ ခုခေတ်စား တာ က အရာရှိ ပေါက်စ(NEW COC) တွေ ဆို ရန်ကုန် မော်လမြိုင် ကို မိနစ်၃၀ အတွင်း ရောက်မဲ့ မြေအောက်လျှပ်စစ် ရထားလမ်း ပြီး သွား ရင် သင်္ဘော တက်ရပါမယ်တဲ့။ အင်တာဗျူးဆက်လိုက် ကြရ အောင်ဗျာ။
ကိုလူပျို။ ။ ကိုလူ ပျို သင်္ဘောမှာ တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင် မယ်ဆို ရင် မ ဖွေးဖွေး ဒီမှာဘာလုပ် မလဲ။
မဖွေးဖွေး။ ။ကိုလူပျို ပို့ လိုက်တဲ့ ပိုက်ပိုက်(ပိုက်စံ)နဲ့ နိုင်ငံခြား ရှော့ပင်း ထွက်မယ။် ကုန်အောင်တော့ မသုံးပါဘူး ။ကိုလူပျို ပြန်လာ နားရင် တစ်လ လောက်သုံး ဖို့ ချန်ထား ပေးမယ်နော်။ ခစ် ခစ်။
ကိုလူပျို။ ။ကောင်းပါပြီ။ နောက်ဆုံး မေးခွန်း လေးတစ်ခု မေးပါမယ်။ ရော့ မဖွေးဖွေး တစ်ရှူး လေး နဲ့ နှပ်ချည်း လေးသုတ် လိုက်ပါ အုန်း။ မြင်ရတာ စိတ်မချမ်း သာလို့ ပါ။ သင်္ဘောသား လောကမှာ လဲ လူသစ်/ အရာရှိပေါက်စ တွေ လည်း မဖေွးဖွေးလို မျိုးနှပ် တစ် ရှုံ ရှုံ နဲ့ နှပ်ချည်း ပါ ထွက်နေ ကြတယ်လေ။
လွယ်လွယ်လေး မေး မယ် မဖွေး ဖွေး``သင်္ဘောသီး ကြိုက် ပါသလား´´။
မဖွေးဖွေး။ ။သင်္ဘောသီး ဆို နုနေ တာ, ပျော့နေ
တာ, နာနေတာ တို့ ဆိုရင်မကြိုက်ဘူး။ ဖွေးတို့ က
ဒေါင်ဒေါင်မြည် သင်္ဘောသီး ဆို ကြိုက်ပါတယ်။
ကိုလူပျို။ ။ဟုတ် ပါပြီ။ ဖုန်း ပြန် ဆက်ပြီး အကြောင်း ကြား ပါ့မယ်။မဖွေးဖွေး ခုပြန်နိုင်ပါပြီ။
မဖွေးဖွေး။ ။ကျေးကျေး နော် ကိုလူပျို
ကိုလူပျို။ ။ ဘာလဲ ကျေးကျေး ဆိုတာ။
ဖွေးဖွေး။ ။ကျေးဇူး လို့ ပြောတာပါရှင်။့
ကိုလူပျို။ ။မှတ်ထား ပါ့ မယ်။ဖွေးဖွေး ကို လည်း ကျေးကျေး ပါ။
(သေရော။ ဂရိသင်္ဘော မှာတော့ ယောင်ပြီး ကျေး ကျေး သွားမလုပ်နဲ့ ဘာဖြစ်သွား မယ် ထင် လဲ? မိတ်ကပ် အောင်အောင။် မိတ်ကပ်စန်းစန်း ။ မိတ်ကပ်ပျို ပျို(ခတ္တမြန်မာပြည်) ဖြစ်သွားမယ်။
ကို လူပျို ဖုန်း လာနေပါတယ်။
အော် ဟုတ်ကဲ့ ဆရာ။
ကျွန်တော် လုပ်ပေး ပါ့မယ်။
ဂွပ်။(တစ်ဖက်မှဖုန်း ချသည့် အသံ )
အေးဂျင့် သမီး အင်တာ ဗျူး မလို့ တဲ့။
လျှောက်လွှာ မတင် ရသေးဘူး။ ခုလာနေပြီ ရောက်တာနဲ့ ကိုလူပျို ကို အင်တာ ဗျူး မယ်တဲ့။
(အေးဂျင့် )အလုပ်ပေး မည့် လူဆိုတော့ ခုနတုန်း ကဖွေးဖွေးကို ပြောတာ VIP ရှိဘူး ဆို တာ APRIL FOOL လုပ်လိုက်တာ။ နောက်တာ အဲ့ဒါမှ VIP အစစ်။
(ဘာသီးလဲ? သင်္ဘောသီး....တော်သေးတယ် သင်္ဘောသီး လဲနေပူ ထဲလျှောက် ရောင်း နေ ရလို့ နုနု ရင့် ရင့် ပျော့ တာမှ ပြဲ နေပါရော လား။)
နောက်ရက်မှ အမှတ်စဉ်နှစ် သက်မွန်မြင့် ကိုဆက် ဗျူးတော့မယ် ဗျာ။
ဟဲ့ကျောင်း သား ဘာတွေ ယောင်နေတာလဲ ထ တော့ အာ ရုဏ် တက် တော့ မယ်။ အာရုံ ဆွမ်း ချက်
သက်မွန်မြင့်ကို အင်တာ မဗျူး တော့ပါဘူး ဘုရား။
ကျွန်တော် ကိုလူပျို (ဘုန်းကြီး ကျောင်းသား )ထ ယောင်သည်။ ........
ရေးသားသူ - XD@msu.